NM [Nosipho Mkhize]: Ungubani uSandile Zwane futhi wenzani?
SZ [Sandile Zwane]: Igama lami uSandile Zwane owaziwa ngelika ‘Legend’, ngingumculi wokholo futhi ngingumbali womculo wokholo. Ngiyilungu le qembu i-Ethekwini Gospel Choir (EGC) ngaziwa kakhulu ngeculo elithi uDumo elaqoshwa bukhoma neqembu i-EGC ePlayhouse eThekwini ngo-2016. Ngike ngashiyelana inkundla nabaculi abaningi kubalwa uSgwili, uDumi Mkokstad, uMalusi Mbokazi, uAyanda Shange, uDavid Dee kanye nabanye.
SZ: Ngaqala ukucula ngo-2009, ngasungula iqembu lomphakathi elibizwa nge-V.O.G, ngabuye ngasiza isikole iSobonakhona High School ngomculo. Ngo-2015 ngangenela ama-auditions e-Joyous celebration kanye nawe Clash of the Choirs ngaba ngomunye owakhethwa. Ngibe sengithathwa kwi-Ethekwini Gospel Choir ngesikhathi kujaja uNtokozo Ngongoma, uSgwili Zuma noPhilile Chonco.
SZ: Eminyakeni ezayo ngizibona ngingumculi osezingeni eliphezulu kuleli, odumisa kwehle amaZulu mhla ngiqopha icwecwe ne-DVD bukhoma. Ngifisa ukusebenzisa nabaculi abaphezulu kubalwa uMfu Benjamin Dube, uNqubeko Mbatha, uDavid Dee kanye nabanye. Emphakathini engisuka kuwo bangibona ngiwumfana osemncane okholelwa kakhulu kuNkulunkulu, ose size kakhulu intsha emphakathini ngomculo wokholo.
SZ: Ngisebenzisane noNtokozo Ngongoma ongumsunguli we-Ethekwini Gospel Choir kanye noNeli Ngongoma ongumsakazi we-DivineTouch Radio FM futhi bangisize ekukhuliseni umculo wami, njengoba ngikwazi ukuzimela noma ngingakaphumi kwi-EGC ngokuphelele.
SZ: Ngizoba nomcimbi ohlelwe yimi ngomhla ka-7 kuNhlangulana [July] onesiqubulo esithi Gospel Concert with SandileZwane ozobe usoFolweni e-AFM VCC emini. Kulo mcimbi kuzobe kukhona uSanele Mtolo, uSphaM, uThamsanqa Mathonsi owaziwa kuma Idols, Imbongikazi kamaVilakazi, uNtokozo Ngongoma kanye nabanye. Bonke laba sengisebenze nabo futhi namanje ngisasebenzisana nabo, njengoba ngizoshicilela i-single ngo-August.
SZ: Kumina kwenzekile kanti nakwabanye kusengenzeka, njenge ntsha uma sikholwa kuNkulunkulu konke kuyenzeka, sizophumelela. Asigxile kumakhono ethu siyeke okungalungile njenge zindakamizwa. Sisebenze kanzima.
SZ: Umathanda ukwazi kabanzi ngami noma nge-single yami ungangena ekhasini lami ku-Facebook elithi : Sandile ZwaneSA noma ku Twitter elithi: @LegendZwaneSA noma ku-Instagram elithi: @SandileZwaneSA.
Uma uthanda ukungiqasha emicimbini eyahlukene ungashayela inombolo ethi: 078 711 4042 noma uthumele umyalezo ngekheli le email elithi: Sandile6.vog@gmail